रोगहरू - सबै रूखहरू | सबै रूखहरू
रूखहरू, जीवित प्राणीहरू जस्तै तिनीहरू हुन्, जीवनभर समय समयमा बिरामी पर्न सक्छ। बीउको अंकुरणबाट, Phytophthora वा Pythium जस्ता रोगजनक फङ्गीहरूले तिनीहरूलाई हानि गर्न सम्भव सबै गर्नेछन्। वास्तवमा, यो अक्सर भनिन्छ कि तिनीहरूको जीवनको पहिलो वर्ष बाँच्ने सम्भावना धेरै कम छ, तर दोस्रो र विशेष गरी तेस्रोबाट तिनीहरू धेरै बढ्छन्।
त्यसोभए, यी बिरुवाहरू के हुन सक्छन्? तिनीहरूले के लक्षणहरू निम्त्याउँछन् र तिनीहरूको उपचार के हो? तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ।, यद्यपि त्यहाँ धेरै छन् जसले समान लक्षणहरू र/वा क्षतिहरू उत्पन्न गर्दछ, तिनीहरूको उपस्थितिको कारणहरू सधैं समान हुँदैनन्।
यसबाहेक, तपाईंले रूखहरूको हेरचाह र मर्मतसम्भारमा अनुभव प्राप्त गर्दा, तपाईंले त्यो महसुस गर्नुहुन्छ रोगहरू सामान्यतया देखा पर्दछ जब तपाइँ तिनीहरूको खेतीमा गल्ती गर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, धेरै पानी हालेर, वा जरालाई सामान्य रूपमा सास फेर्न नदिने धेरै कम्प्याक्ट माटोमा रोपेर।
यी सबैको लागि, हामी तपाईंलाई रूखहरूलाई असर गर्न सक्ने सबै रोगहरू जान्न चाहन्छौं, र ती उपायहरू लड्न सबैभन्दा प्रभावकारी छन्।
Anthracnose: यो के हो र यसलाई कसरी उपचार गर्ने?
रूखहरू, जतिसुकै राम्रोसँग हेरचाह गरिएको र स्वस्थ भए तापनि, विभिन्न प्रकारका सूक्ष्मजीवहरूद्वारा प्रभावित हुन सक्छ। ब्याक्टेरिया,…
बिरुवाको मृत्यु वा भिजाउने बन्द कसरी रोक्न?
बीउबाट रूखहरू हुर्किएको हेर्नु एक समृद्ध र बहुमूल्य अनुभव हो। यद्यपि आज पनि…